जर्मन भाषा र संस्कृति
एक राम्रो दिन - जर्मन भाषा र संस्कृति छ
यो लेख हाम्रो मंच मा एक धागे (सम्बन्धित सन्देशहरु) को सीधा परिणाम हो। छलफल "सरल," को रूप मा सरल सरल अवधारणा को आसपास केन्द्रित को रूप मा मुस्कुराते हो या कुनै को एक राम्रो दिन को चाहना। यो चाँडै स्पष्ट भयो कि तपाईले जर्मनमा केहि भन्न सक्नु हुनाले तपाईं मतलब नहोला। वाक्यांश "Ich wünsche मा तपाईं टैग छ!" बरु अजीब लाग्छ। (तर तल टिप्पणी हेर्नुहोस्।) "शुभ दिन हो!" भन्न प्रयास गर्दै। जर्मनमा भाषाको राम्रो उदाहरण हो जुन सांस्कृतिक रूपमा अनुपयुक्त छ- र जर्मनको (या कुनै भाषा) कसरी शब्दहरू र व्याकरण सिक्न सिक्नको राम्रो उदाहरण हो।
जर्मनीमा अझ धेरै सामान्य बिक्री र मानिसहरूको सर्भरबाट " Schönen Tag noch! " शब्द सुन्नको लागि।
पहिलेको सुविधामा, "भाषा र संस्कृति," मैले स्प्रेच र संस्कृतिको बीचको व्यापक कुराकानीमा केही जडानहरूबारे छलफल गरे। यस समयमा हामी जडानको एक विशिष्ट पक्षलाई हेर्छौं, र किन भाषा भाषाका लागि जर्मनको शब्दावली र ढाँचा भन्दा बढी सजग रहनुको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ।
उदाहरणका लागि, यदि तपाई अजनबहरू र आकस्मिक परिचितहरूमा जर्मन / युरोपियन दृष्टिकोणलाई बुझ्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं सांस्कृतिक गलतफ्लुन्डिङको लागि प्रधान उम्मेदवार हुनुहुन्छ। मुस्कान लिनुहोस् ( दास लानिभन )। कुनै पनि भन्नको लागी तपाईं एक गोक्रा हुनु हुँदैन, तर जर्मनमा कुनै विशेष कारणको लागि मुस्कुराउँदछ (सडकमा पारेर) सामान्यतया (मौन) प्रतिक्रिया पाउनेछ कि तपाइँ एकदम सरल-मनपर्छ वा "सबै त्यहाँ" हुँदैन। (या यदि उनि अमेरिकियों को देखने को लागि प्रयोग गरिए हो, शायद तिमी उन अजीब मुस्कुराए अमिस को एक अझै अर्को हो।) अर्कोतर्फ, यदि केहि स्पष्ट, वास्तविक कारण मुस्कान छ, तब जर्मनहरूले उनको अनुहार मांसपेशियों को व्यायाम गर्न सक्छन् र ।
तर के मैले मेरो संस्कृतिमा "राम्रो" विचार गर्न सक्छु भन्ने अर्थ एक युरोपेलीको लागी केहि चीज हो। (यो मुस्कुराउने चीज उत्तरी युरोपमा लागू हुन्छ।) अलौकिक, एक स्वरलाई राम्रो बुझ्न र मुस्कान भन्दा स्वीकृत हुन सक्छ।
मुस्कुराउनु भन्दा धेरैजसो जर्मनहरूले "सुन्दर दिन छ" भन्ने शब्दलाई विचार गरिरहेकी थिइन्।
एक अमेरिकन यो सामान्य र अपेक्षित कुरा हो, तर म यो सुनेको छु, कम म यसको प्रशंसा गर्छु। सबैले भने, यदि म बिरामीको लागि एंटी-थ्रेको औषधि किनेको सुपरमार्केटमा छु, म राम्रो दिन दिन सक्छु, तर त्यसो गर्दा चेकरको "विनम्र" हो-राम्रो-दिनको टिप्पणी अझ बढी देखिन्छ। सामान्य भन्दा अनुपयुक्त। (के उनले नोटिस गरेन कि म थोरै औषधि किन्न सक्छु, बरु, भन्नु, बियरको छ-प्याकेट?) यो एक सच्चा कथा हो, र त्यो मेरो साथमा एक जर्मन साथी हो जुन त्यो हास्यको राम्रो अर्थ हुन्छ र यस अजीब अमेरिकन अनुकूलन द्वारा हल्का माला। हामी त्यसमा मुस्कुराउँथ्यौं, किनकि त्यसो गर्नुको वास्तविक कारण थियो।
मैले व्यक्तिगत रूपमा जर्मन बिक्रेताको अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिन्छु जसले "अफ विइडिर्सेहेनन!" बिना ढिकै ढोकाबाट बाहिर निकालिदिन्छ। - भले पनि तपाईले केहि पनि खरिद गर्नुभएन। ग्राहकलाई त्यस्ता विदाईको साथ जवाफ दिइन्छ, एक राम्रो दिनको लागि कुनै पनि शंकास्पद इच्छाहरु बिना एक साधारण राम्रो अलविदा। यो एक कारण हो धेरै जर्मनहरूले बिभिन्न विभागको स्टोर भन्दा सानो पसललाई गाह्रो बनाउनेछन्।
कुनै पनि भाषा सिकाउने व्यक्तिले सधैं यसो भन्छन: "एन्डरे लन्डर, रियर सिटिन" (लगभग, "जब रोममा ...")। केवल किनकी केहि एक संस्कृति मा गरेको छ मतलब यो होइन कि हामीले मान्नु पर्छ कि यो स्वचालित रूपमा अर्कोमा हस्तान्तरण हुनेछ।
अर्को देशले साँच्चिकै अन्य अर्थ राख्दछ, विभिन्न परम्पराहरू। मेरो संस्कृतिको मार्ग हो "मेरो सबैभन्दा राम्रो तरिका" - वा समानतः दुर्भाग्यवश संस्कृतिलाई गम्भीर विचार पनि नगर्ने - एक भाषा सिकाउने व्यक्तिको नेतृत्व गर्न सक्छ जुन वास्तविक जीवनको अवस्थामा खतरनाक हुनु पर्छ।
भाषा-संस्कृति सम्बन्धको बारेमा अघिल्लो सुविधा।
जर्मन मार्ग र अधिक
हाइड फ्लिपो द्वारा जर्मन संस्कृति मा समर्पित वेब साइट।
Tatyana Gordeeva द्वारा एक वेब साइट।
फ्रान्सेलीमा "म्यान मेक" कसरी प्रयोग गर्ने सिक्नुहोस्
Betsuni - सरल जापानी वाक्यांशहरु
'हाकर' प्रयोग गर्दै
शीर्ष शब्दावली बिल्डिंग किताबहरु
कसरी अनियमित फ्रेन्च शब्द "रिवावोइर" प्रयोग गर्ने
लिखित पारंपरिक शैक्षणिक फ्रांसीसी बनाम आधुनिक बोलने वाला स्ट्रीट फ्रेंच
के हो "ए ए ला ला" फ्रेन्चमा?
बच्चाहरु को बारे मा बात गर्न स्पेनिश शब्द
जापानी शब्द "माता" के हो?
फ्रांसीसी अभिव्यक्ति शब्द 'एलर' संग
चिनोडे विश्वविद्यालयको होनोलुलु प्रवेश
साँचो प्रेम प्रतीक्षा
'पास्कुआ' को धेरै अर्थ बारे सिक्नुहोस्
अमेरिकी क्रांति: गिलफोर्ड कोर्ट हाउस को युद्ध
सजावटी सीमाहरु संग क्रिसमस लेखन पत्र
गोल्फमा 'केाना बॉल' के हो?
क्या क्रिसमस चलचित्र आधुनिक क्लासिक्स हुन्?
ओलम्पिक उच्च कूपन नियम
ढिला बन्द (वाक्य प्रशोधन)
के हो (र) छ
फ्रेन्च ओर्डिनल नम्बरहरू र फ्याक्चरहरू के हुन्?
कप्तान कंगारू र ली मार्विन, युद्धका साथीहरू?
एलीट बास एङ्गलर अस्वीकार मा Guntersville
14 Pianists को लागि मजेदार उपहार विचार
एक क्लब प्रायोजक हुनु
विदेशी विनिमय दर चार्ट कसरी व्याख्या गर्न
जिन्दगीमा कसरी बिस्तार गर्ने सिक्नुहोस्
अस्तित्ववाद के हो? अस्तित्ववादी इतिहास र विचार
जिंगले शेलको बारेमा सबै
कप कार्ड के हो?
एग्नेस स्कट कलेज प्रवेश
इटालियनमा पिउने आदेशहरू